အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News March 2019 – မတျလ ၂၀၁၉ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Choice » အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News March 2019 – မတျလ ၂၀၁၉
အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News March 2019 – မတျလ ၂၀၁၉
Posted by kai on Mar 9, 2019 in Editor's Choice, Editor's Notes, Myanmar Gazette | 12 comments
အရောငျရငျ့မှတျတမျး Bold News March 2019 - မတျလ ၂၀၁၉
Vol7Issue3#123 11″ x 17″ 32 Pages Printed in Los Angeles
မောငျစှမျးရညျရဲ့ မနျးကနကျကလှမျးလကျြတမျးလကျြ မပနျးခကျကို။
မတျလအလှပနျးအဖွဈ Allison Hon။
မသန်တာအောငျ(ဆေးပညာဘှဲ့) ရဲ့ ကနျြးမာရေးဆောငျးပါး Giant cell arteritis (GCA)။
KZ ရဲ့ Bone Broth & Green Juice အစားအသောကျကဏ်ဍ။
ဘလကျခြော အငျတာဗြူးတဲ့ ဂီတပညာရှငျပကျထရဈ အပိုငျး ၂။
Henry Kao ရေးတဲ့ ၂၀၁၉ ပွညျတျောပွနျအလညျခရီး။
ဆရာထှနျး( တိုငျးရငျးဆေး)ရဲ့ ကုံကုမံရဲ့အစှမျး။
လစဉျဖျောပွနကြေ ကဗြာ၊ဗဒေငျ၊သတငျးဒိုငျယာရီ၊ အင်ျဂလိပျသငျခနျးစာ တို့နဲ့အတူ မတျလထုတျ မွနျမာ့ဂဇကျ ထှကျနပေါပွီ။ မွနျမာစတိုးဆိုငျမြားနဲ့ ဘုနျးကွီးကြောငျး၊ ခပျြချြ၊ ၊ မွနျမာစားသောကျဆိုငျမြား၊ မွနျမာဆရာဝနျဆေးခနျးတို့မှာ ရယူပါ။
မောင်စွမ်းရည်ရဲ့ မန်းကနက်ကလွမ်းလျက်တမ်းလျက် မပန်းခက်ကို။
မတ်လအလှပန်းအဖြစ် Allison Hon။
မသန္တာအောင်(ဆေးပညာဘွဲ့) ရဲ့ ကျန်းမာရေးဆောင်းပါး Giant cell arteritis (GCA)။
KZ ရဲ့ Bone Broth & Green Juice အစားအသောက်ကဏ္ဍ။
ဘလက်ချော အင်တာဗျူးတဲ့ ဂီတပညာရှင်ပက်ထရစ် အပိုင်း ၂။
Henry Kao ရေးတဲ့ ၂၀၁၉ ပြည်တော်ပြန်အလည်ခရီး။
ဆရာထွန်း( တိုင်းရင်းဆေး)ရဲ့ ကုံကုမံရဲ့အစွမ်း။
လစဉ်ဖော်ပြနေကျ ကဗျာ၊ဗေဒင်၊သတင်းဒိုင်ယာရီ၊ အင်္ဂလိပ်သင်ခန်းစာ တို့နဲ့အတူ မတ်လထုတ် မြန်မာ့ဂဇက် ထွက်နေပါပြီ။ မြန်မာစတိုးဆိုင်များနဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ချပ်ခ်ျ၊ ၊ မြန်မာစားသောက်ဆိုင်များ၊ မြန်မာဆရာဝန်ဆေးခန်းတို့မှာ ရယူပါ။
Windows 10 သမားများ.. ယူနီကုဒ်နဲ့ဇော်ဂျီ ၂မျိုးလုံး စာလုံးအနေအထား အမှားအယွင်းမရှိ.. Chrome Browser မှာ ဖတ်နိုင်ပြီး.. ယူနီကုဒ်နဲ့ စာရေးနိုင်သောနည်း.. ( တစ်-နှစ်-သုံး)
.. ၀င်းဒိုးလက်ပ်တော့…ဒက်စ်တော့ပ် ကွန်ပြူတာသမား .လုပ်ရမှာတွေအဆင့်ဆင့် ①②③ က.. တစ် – နှစ် – သုံး …. ၃ ချက်ထဲ…..
①။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ညွှန်းပါတဲ့.. Pyidaungsu font ကို Download/Install လုပ်ပါ၊
Once you have your font downloaded ( Pyidaungsu.ttf) and available, just right-click it and click Install.
②။ Chrome Browser မှာ Zawgyi font ထည့်ထားမိရင်.. Font Setting Default ပြန်ပြောင်းပါ။ မထည့်ထားရင် .. စက်ရုံထုတ်အတိုင်းထားပါ.. ၊ ဘာမှလုပ်ရန်မလို..။ ))
Zawgyi Font နဲ့ရေးထားတာတွေ မြင်ရအောင် အောက်ကအဆင့်အတိုင်းလုပ်ပါ။ ယူနီကုဒ်နဲ့ရေးထားတာတွေက အလိုလိုမြင်ရပြီးဖြစ်ပါတယ်..။ MUA Extension ထည့်လိုက်ရင် ယူနီကုဒ်/ဇော်ဂျီ ၂မျိုးလုံးကို မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
Add an MUA Extension
(က) Open the Chrome Web Store.(အောက်ကလင့်ခ်ကိုနှိပ်)
(ခ) In the left column, click Extensions.
(ဂ) Browse or search (MUA Web Unicode Converter) that you’d like to add.
(ဃ) Restart the Browser. ( ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်)
③။ ၀င်းဒိုးမှာ မြန်မာစာ Burmese Language/Keyboard (Visual Order) ထည့်ပါ။
ထည့်နည်းအဆင့်ဆင့်..( က – ဌ )
(က) အရင်ဆုံး windows taskbar ရဲ့ဘယ်ဘက်ထောင့်မှာရှိတဲ့ Windows icon လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ
(ခ) အဲ့မှာစက်သွားပုံ setting ကိုနှိပ်လိုက်ပါ
(ဂ) Update and security ကိုနှိပ်ပါ
(ဃ) OS build info မှာ မိမိ Windows version ကိုကြည့်ပါ။ Version က အနည်းဆုံး 1803 ဖြစ်ရပါမယ်(မဖြစ်သေးရင် အခုပဲ update တင်လိုက်ပါ။ Windows OS အမြဲ Update ဖြစ်တာသာသုံးပါ..။)
(င) ပြီးရင် Time and Language ကိုသွားပါ
(စ) Language ကိုရွေးပါ
(ဆ) Add language ကိုနှိပ်ပါ
(ဇ) Search bar မှာ my ဟုရိုက်ထည့်ပါ
(ဈ) မြန်မာစာ ဆိုတာကိုနှိပ်ပါ။ Next ကိုနှိပ်ပါ။ ( မြန်မာ Visual Order )
(ည) Install ကိုနှိပ်ပါ
(ဋ) ဒါဆို windows taskbar ရဲ့ညာဘက်ထောင့်နားမှာ ENG ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်လာရင်နှိပ်လိုက်ပါ၊ ENG နဲ့ မြန်မာစာ လက်ကွက်နှစ်မျိုးတွေ့ပါလိမ့်မယ်
(ဌ) ENG နဲ့ မြန်မာစာ လက်ကွက်ပြောင်းချင်ရင် Win+Space ကိုနှိပ်ပါ။( Zawgyi တုံးက Ctrl+Shift နဲ့တူတူပါပဲ)
… ပြီးပါပြီ။ သင်ဟာ မြန်မာဘာသာစကား စနစ်တကျ ဖြစ်အောင် ကူညီပေးသူတ‌ယောက် ဖြစ်သွားပါပြီ..။
စာရိုက်ရင် ယူနီကုဒ်နဲ့သာ ရိုက်ပါ..။ သင့်အချက်အလက်တွေ.. အင်တာနက်မှာ Facebook နဲ့အတူတူ မပျက်မပျောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်..။
ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးထားရင်တော့.. တနေ့နေ့မှာ ကွယ်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်..။
Unicode က ကမ္ဘာကအသိအမှတ်ပြု စနစ်ပါ..။ Google, Microsoft, Apple နဲ့ Facebook တို့လည်း သုံးကိုသုံးရပါတယ်.။
“ယူနီကုဒ်နဲ့ ( Pyidaungsu MM ) လက်ကွက် စာရိုက်နည်း”
အောက်က လင့်ခ်ကတဆင့် ကြည့်ပါ။ အကျင့်မရသေးရင် ဇော်ဂျီထက်ခက်သလိုလို ထင်ရပါမယ်..။
ရရစ်နဲ့.. ဒ၊ယ၊ဂ၊၀ တွေလောက်ပဲ.. နည်းနည်းဂရုစိုက်ကျင့်လိုက်ဖို့လိုပါတယ်..။
ကဲ.. ကို‌ရှအေမရေိကနျတို့ ရေ…
၂၀၂၁ ကစပွီး ဥရောပသှားလညျရငျ ၂၂နိုငျငံအတှကျ ဗီဇာ လြှောကျကွရတော့မယျတဲ့ဗြ..။
အရငျကလို ပါတျဈပို့စာအုပျပွာလေး အ၀ငျလ၀က ကောငျတာပျေါပဈတငျ .. တနျးဝငျလို့မရတော့ဘူးတဲ့..။ ဗီဇာကွေးတော့မသိရသေး..။ တခါယူ၃နှဈခံမယျလို့တော့ ဆိုပါကွောငျး..
MAGA Make America Great Again.
America First! NOT American First အမရေိကနျ ပထမ မဟုတျ.. ခဲ့..
22 European countries တှကေ..
By January 1, 2021, all Americans traveling to Europe will need to apply for the ETIAS visa, which stands for European Travel Information and Authorization System.
The visa allows US travelers to enter 22 countries in the Schengen Zone, which includes Italy, Germany, and France. It’s not needed to enter the UK.
Travelers can use their ETIAS visas for up to three years, and can enter Europe multiple times.
မိုမိုကို ဖကျြဆီးလိုကျပွီဖွဈတာမို့.. သူမရဲ့ကြိနျစာလညျး.. အတူတကှ ပကျြခဲ့ပွီလို့.. မူလဖနျတီးသူ ဂပြနျလူမြိုး ခေးစုကဲ အအိစို Keisuke Aiso ကဆိုပါတယျ..။
အတိအကကြိုတော့.. အောကျက စာကို ကွောကျနကွေရှာတဲ့ကလေးတှကေို ပေးသိလိုကျပါ..။
“It doesn’t exist anymore, it was never meant to last,” Aisawa was quoted as saying. “It was rotten and I threw it away. The children can be reassured Momo is dead – she doesn’t exist and the curse is gone.”
ဖွဈပုံက.. Momo challenge ဆိုပွီး Online Game ကို ရှယျကွ..ကွညျ့ကွပွီး.. ကွညျ့တဲ့ကလေးသူငယျတှမေယျ.. ကွောကျစိတျတှဖွေဈ..၊ အာဂငျြတီးနားပွညျက အသကျ၁၂နှဈကလေးမလေးဆို..သတေဲ့အထိဖွဈကုနျတာမို့. ရဲနဲ့ဥပဒပေိုငျးဆိုငျရာတှေ ပါတျသကျကုနျပွီး.. တိုကြိုမွို့ ဆငျခွဖေုံးတနရောက.. မူလဖနျတီးသူ အလုပျခနျးအထိလိုကျသှားပွီး.. ပွဿနာတှတေကျကုနျတာဖွဈပါတယျ..။
နောကျဆုံး.. မူလဖနျတီးသူက.. အဲဒီ အရုပျကိုဖကျြဆီးလိုကျပွီလို့ကညြောလိုကျတာဖွဈပါတယျ..။
တကယျတော့.. သတျတယျ..၊ သတေယျ..၊ သတျပဈ.. ၊ သဒေဏျပေးပဈ.. စတဲ့စကား.. စာသားတှကေ.. လူတှရေဲ့ မသိစိတျမှာ လှမျးမိုးပါတယျ…။ စိတျတှခေကျထနျကွမျးတမျးပါတယျ…။ မသိစိတျထဲမို့.. ရုတျတရကျမပျေါလှငျပမေယျ့.. ကိုယျဘဝနဲ့ အလုပျတှမှောလှမျးမိုးနတေတျပါတယျ..။
မွနျမာတှရေဲ့.. သတျပဈ..။ အသကျခငျြးလဲလိုကျမယျ…. စတဲ့နစေ့ဉျပေါ့ပေါ့သုံးနတေဲ့.. စာ။စကားမြား။ လူမွငျကှငျးတှမှော ထားတဲ့.. ငရဲသား.. ငရဲကရြုပျမြား.. ။ လူသတျ..လူသအေရုပျမြား.. စတာတှလေညျး.. လူ့ဘောငျအဖှဲ့အစညျးနဲ့.. ကလေးသူငယျတှအေတှကျမကောငျးပါ..။
ရုပျရှငျ.. ဗီဒီယို.. ပိုစတာတှမှောလညျး.. မတပျ..မတငျစကောငျးပါ..။ မညျသူမဆိုအလှယျကွညျ့.. ဖတျ.. နားထောငျနိုငျတဲ့.. သီခငျြး.. ကဗြာ..စာတှမှောလညျး.. မရေးစကောငျးပါ..။
ဆိုငျရာ အဖှဲ့အစညျးတှကေ.. Rated သတျမှတျခကျြထား.. ထိမျးကှပျပေးသငျ့ပါတယျ..။
ကိုယျ့အနာဂါတျတှကေို.. ကလေးသူငယျတှေ.. ၊ လူကွီးမဖွဈမရငျ့ကကျြသေးသူကို.. စိတျဓတျတှကေို.. စာ/စကားတှနေဲ့ ဖကျြဆီးကွမျးတမျးစတောဖွဈပါတယျ..။
ပညတျသှားရာ ဓာတျသကျပါ..။ ၀ဇီဗဒေ ထိတိုငျးရှ..။
Ryan General·March 4, 2019·6 min read
Japanese Artist Who Created ‘Momo’ Has Destroyed It After Causing Online Hysteria
“Momo is dead – she doesn’t exist and the curse is gone.”
အမရေိကနျတှကေ ‌ဆှမြေိုး‌တှကေို ဗီဇာ‌လြှောကျပွီး‌ချေျါရငျ ကွာ‌တော့မယျ..
March 14, 2019, 3:33 PM PDT
THOMPSON CHAU 18 MAR 2019
FSG (Myanmar) Security Services Co Ltd is registered asaforeign services company, according to the Directorate of Investment and Company Administration (DICA). Last month it advertised for 30 security personnel in Myanmar.
DICA’s company profile of the joint venture lists Daw Sandar Win (Myanmar), Shi Yi (China), Zhang Huagang (China), Tan Qing (China) and U Si Thu (Myanmar) as directors. Daw Sandar Win is believed to be the sister of U Kyaw Win, who owns Shwe Than Lwin Media, the parent company of SkyNet.
Disney closes $71 billion deal for 21st Century Fox — and it’s likely to shake up the media landscape
Disney has closed its $71 billion acquisition of Fox’s entertainment business, putting “Cinderella,” ”The Simpsons,” ”Star Wars” and “Spider-Man” under one corporate roof.
Than Tha Aung Program Facilitator at Mekong Institute
The phrase “Industry 4.0” has becomeabuzzword in Thailand. From agriculture to education, every sector aims to upgrade to “smart” status. This means the Thai economy is going to be automated, with human-machine…
In Asean, Singapore has chalked up some success in its digital ecosystem. Long story short: the whole world is getting ready for Industry 4.0, or the fourth industrial revolution. Amidagreying population…
The total fertility rate describes the projected number of births per 1,000 women, or the average number of babiesawoman has during her lifetime. A 2018 study published in the Lancet found that in the 1950s, women were having an average of 4.7 children but that in 2017, it’s about half of that at 2.4.
On January 23, Thailand’s King Maha Vajiralongkorn issuedaroyal decree to call forageneral election and, shortly after, the Election Commission announced that it will be held on March 24. The date announced comes afterastring of postponements — five at the last count — of an election that will usher in the first civilian government since the 2014 coup.
Prime Minister Prayut Chan-o-cha, who heads the National Council for Peace and Order (NCPO), was announced as the prime ministerial candidate of the Palang Pracharat Party (PPRP) on February 7. The PPRP isapro-junta party that was formed by four cabinet ministers of the current military regime, and is seen by some asaproxy for the NCPO.
Despite the efforts by anti-junta parties to draft symbolic and high-profile figures as competitors, the military-drafted 2017 constitution ensures that Prayut is still in pole position to emerge victorious. Changes introduced in the 2017 constitution have paved two pathways for the Prayut’s prime ministerial nomination. Members of the lower house, known as the House of Representatives, first vote for the prime ministerial candidates of parties with at least 25 seats in the house. Should the vote be inconclusive,asecond simple majority vote is held across both houses to select an individual as prime minister. This individual may be unelected; Prayut himself cannot constitutionally run in the upcoming elections. Prayut enjoysasignificant numerical advantage in suchavote, as all 250 members of the upper house are appointed by the NCPO.
အစိုးရတပ်မတော်က ဌာနေပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကို ထုတ်ပေးထားတဲ့ တချို့လက်နက်တွေဟာ အရေးပေါ် တိုက်ပွဲဖြစ်လာရင် အသုံးပြုဖို့ အဆင်မပြေတာကြောင့် ကိုယ်ပိုင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေနဲ့ ခေတ်မီတဲ့ လက်နက်နဲ့ ခဲယမ်းတွေကို ဝယ်ယူဖြည့်တင်းနေရတာကြောင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ နယ်စပ်ဒေသတွေမှာ လက်နက်ဈေးကွက်တရပ် ဖြစ်ထွန်းနေပြီး ထိန်းချုပ်ဖို့လည်း ခက်ခဲနေပါတယ်။
“လက်နက်တွေက ပြည်ပက တင်သွင်းတာပါ။ အခုဆို ပိုလွယ်သွားပြီး ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ထဲမှာ နည်းနည်း အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့သူဆီမှာ ဒါမျိုး အမျိုးအစားက ဘယ်လောက် ဘယ်နှစ်လက် အရောက်ပို့ပေးပါလို့ဆိုရင် ကိုယ်မှာ ပိုက်ဆံရှိဖို့ပဲလိုတယ်။ အခုချက်ချင်း မှာလို့ရတယ်။ ဘာမှ မခက်တော့ဘူး။ အမေရိကန်က လက်နက်လည်း ရောက်တယ်။ နိုင်ငံပေါင်းစုံက လက်နက်လည်း ရောက်တယ်။ အခုခေတ် ဖုန်းတွေ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွေက အဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ ဘာမှ မခက်တော့ဘူး။ ပိုက်ဆံချမ်းသာတဲ့သူက ဘယ်နိုင်ငံကထုတ်တဲ့ လက်နက်ကို ဘယ်နှစ်လက်ယူချင်လဲ ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့် လက်နက်တွေကလည်း ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်လာတယ်” လို့ ကောင်းခါးပြည်သူ့စစ် (ဌာနေ) က ဗိုလ်မှူးအဆင့်ရှိ အရာရှိတဦးက ပြောပါတယ်။
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ်မှာ လက်ရှိ အမ်-၂၂ သေနတ်အရှည်တလက်ကို ငွေကျပ် သိန်း ၄၀ ဝန်းကျင်၊ ပါ့ရီအမျိုးအစား သေနတ်အရှည်တလက်ကို သိန်း ၆၀ ဝန်းကျင် အမေရိကန်ထုတ် လူဂါအမျိုးအစား ပစ္စတိုသေနတ်တလက်ကို သိန်း ၈၀ ဝန်းကျင်နဲ့ ကျန်တဲ့ အမ်-၁၆/ ၂၃/ ၂၄၊ အေကေ-၄၇/ ၅၆/ ၇၄ စသဖြင့် လက်နက်ငယ်၊ လက်ပစ်ဗုံး၊ ကျည်မျိုးစုံကို အမျိုးအစားနဲ့ မော်ဒယ်အလိုက် ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိကာ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ကြပါတယ်။